किन मार्शल स्पिकरहरू तपाईंको अर्को लक्जरी यात्रा स्पिकर हुनुपर्छ?
यदि तपाइँ तपाइँको यात्रा मा तपाइँ संग लैजान को लागी एक अचम्मको पोर्टेबल लक्जरी स्पिकर को लागी खोज्दै हुनुहुन्छ, मार्शल स्पिकरहरु भन्दा अगाडि नहेर्नुहोस्! यी स्पिकरहरू विभिन्न अवसरहरूको लागि उपयुक्त छन्, गर्मीको साँझमा बगैंचामा केही संगीतको आनन्द लिने देखि प्लेनमा चलचित्र हेर्न सम्म। यहाँ चार कारणहरू छन् किन तपाईंले आफ्नो अर्को यात्रा खरिदको लागि मार्शल …
किन मार्शल स्पिकरहरू तपाईंको अर्को लक्जरी यात्रा स्पिकर हुनुपर्छ? Read More »
२०२२ मा कुन बढी शक्तिशाली र विलासी छ?
धेरै मानिसहरू बहस गर्छन् कुन लक्जरी SUV राम्रो हो – Audi A8 वा मर्सिडीज S-Class। तर कुन एक वास्तवमा अधिक शक्तिशाली छ? अश्वशक्तिको हिसाबले, Audi A8 369 hp संग शीर्षमा आउँछ। अर्कोतर्फ मर्सिडीज एस-क्लासले ४७९ एचपीको साथ अलि बढी ओम्फ प्रदान गर्दछ। तर ती सबै घण्टी र सिट्टीको ’boutमा के हुन्छ? Audi A8 अद्भुत १२ …
२०२२ मा कुन बढी शक्तिशाली र विलासी छ? Read More »
2022 मर्सिडीज-एएमजी GLE 53 कूप: पहिलो ड्राइभिङ छापहरू
२०२२ को समीक्षा
2022 Mercedes-AMG GLE 53 Coupe अर्को वर्ष रिलिज हुने प्रिमियम क्रसओभर हो। मानक GLE मोडेलहरूको विपरीत, यो केवल AMG ट्युन गरिएको विकल्पको साथ प्रस्ताव गरिएको छ। यी कारहरू प्रदर्शन र विलासितालाई ध्यानमा राखेर बनाइएका छन्। यो कारको सबैभन्दा राम्रो नयाँ विशेषता यसको ढलान छत हो। तर त्यहाँ यात्रु र कार्गोका लागि कम ठाउँ छ ’cause …
2022 मर्सिडीज-एएमजी GLE 53 कूप: पहिलो ड्राइभिङ छापहरू Read More »
Razorpay समीक्षा – Woocommerce र Shopify संग राम्रो काम गर्दछ
Razorpay भारत मा अग्रणी भुक्तानी गेटवे प्रदायक मध्ये एक हो। यसको स्थापना हर्षिल माथुर र शशांक कुमारनले गरेका थिए। कम्पनीले अनलाइन भुक्तानी, इनभ्वाइसिङ, र सङ्कलन जस्ता सुविधाहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दछ। यो गो मा भुक्तान गर्न को लागी एक मोबाइल एप पनि प्रदान गर्दछ। Razorpay सँग3मिलियन भन्दा बढी ग्राहकहरू छन् र वार्षिक रूपमा …
Razorpay समीक्षा – Woocommerce र Shopify संग राम्रो काम गर्दछ Read More »
Shiprocket समीक्षा – डोरस्टेप पिक-अप, वास्तविक-समय ट्र्याकिङ, र धेरै ढुवानी विकल्पहरू
Shiprocket एउटा यस्तो कम्पनी हो जसले २०१४ देखि eCommerce ढुवानी सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ। तिनीहरूसँग कुरियर साझेदारहरूको विशाल नेटवर्क छ र तिनीहरू WooCommerce, Shopify, आदि जस्ता प्रमुख eCommerce प्लेटफर्महरूसँग एकीकृत छन्। तिनीहरू डोरस्टेप पिक-अप, वास्तविक-समय ट्र्याकिङ, र प्रस्ताव गर्छन्। आफ्ना ग्राहकहरूलाई धेरै ढुवानी विकल्पहरू। विगत केही वर्षहरूमा, Shiprocket ई-वाणिज्य शिपिंग सेवाहरूको अग्रणी प्रदायकहरू मध्ये …
Shiprocket समीक्षा – डोरस्टेप पिक-अप, वास्तविक-समय ट्र्याकिङ, र धेरै ढुवानी विकल्पहरू Read More »
ABCsteps समीक्षा – 250 मिलियन डलर कुल बिक्री मा ग्राहकहरु को लागी उत्पन्न
२०२२ को समीक्षा, २०२२ को समीक्षा, २०२२ को समीक्षा, २०२२ को समीक्षा, २०२२ को समीक्षा
ABCsteps एक अनलाइन मार्केटिङ कम्पनी हो जसले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि कुल बिक्रीमा 2500 करोडभन्दा बढी कमाएको छ। कम्पनीले अत्याधुनिक कार्यसम्पादन मार्केटिङ र मार्केटिङ स्वचालन प्रविधिहरूको प्रयोग गरी उच्च प्रतिफल दिने र उद्योगहरूको विस्तृत दायरामा आफ्ना ग्राहकहरूका लागि बिक्री उत्पन्न गर्न प्रयोग गर्छ। चाहे तपाईं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, वा मलेसियामा हुनुहुन्छ, ABCsteps ले तपाइँको …
ABCsteps समीक्षा – 250 मिलियन डलर कुल बिक्री मा ग्राहकहरु को लागी उत्पन्न Read More »